Xariggan xariifka ah ee 26 $ caqli ahaan wuxuu ka kooban yahay afar Alexa Cards Smart Cards - BGR - TELES RELAY
ACCUEIL » heshiisyo Qalabkaan xasaasiga ah ee 26 $ xariggiisa wuxuu ka kooban yahay afar Alexa oo xariif ah oo bir ah - BGR
Qalabkan xariifka ah ee '26 $ smart' wuxuu ka kooban yahay afar Alexa oo xariif ku ah hal - BGR
Hadaad iibsato shey caqli gal ah oo ay sameysay shirkad weyn, waxaad bixin doontaa inta udhaxeysa 20 $ iyo 30 $ midkiiba. Xitaa haddii aad u tagto astaan ​​yar, waxaad filanaysaa qiyaastii $ 15 $ midkiiba, haddii aadan sameynin iibsi wanaagsan. Waa tan ikhtiyaar kale: halkii aad ku kharash gareyn lahayd ilaa 30 $ kumbuyuutar caqli-gal ah, isla isla kharashgaree ama xitaa kayar a Teakin Smart Power Strip . Waxay leedahay afar shey-gacmeedyo caqli-gal ah oo la xakameyn karo oo la shaqeeya codsi, IFTTT, Alexa ama Kaaliyaha Google. Maxaad u xakameyneysaa aalad markii aad xakameyn karto afar isla qiimeyn?
XASUUSINTA KONTAROOLKA - Marxaladdan xarig-tirka awoodda korantada leh ay si guul leh ugu xiran tahay, waxaad u xakameyn kartaa awoodda korantadaada. Waxyaalaha firfircoon / hawlgaliyay barnaamijka bilaashka ah (nolosha caqliga leh). Xitaa haddii aadan guriga joogin, waxaad si sahlan uga xakamayn kartaa qalabkaaga elektaroniga meel kasta. Waxaad sidoo kale xakameyn kartaa badhanka si gooni ah taleefankaaga. Fudud in la isticmaalo oo lagu rakibo, waxay ubaahantahay isku xir xariir Wi-Fi aamin ah 2,4 GHz.
VOICE COMMAND - Wareegto Amazon Alexa, Kaaliyeha Hoyga Google iyo IFTTT, xakamee qalabka guriga adoo isticmaalaya fiilada feylka ah adigoo si fudud u bixinaya codadka codka ah ee Alexa ama Google. Wizard. Iyada oo aan lahayn xarun loo baahdo, xarigga korantada casriga ah wuxuu la shaqeeyaa Wi-Fi router kasta isagoon u baahnayn xarun gooni ah ama adeegga rukhsad bixinta.
MULTI-PROTECTION - Xuddunta awoodda caqliga leh ee TECKIN waa UL la ansixiyey oo laga sameeyey qalab tayo sare leh. Waxay taageertaa 110 ~ 240V, culeyska ugu sareeya ee 10A. Wareegga wareegga ayaa si toos ah u shaqeeya marka uu xaddidan yahay xadiga, sidaas darteed iska ilaalinta waxyeelada aaladaha heer kulka sare leh. Waxyaabaha PCV0 ayaa gurigaaga si badbaado leh u ilaalin kara.
QEEXIDDA BARNAAMIJKA IYO saacadda - Samee Power Smart ka Strip inuu ka soo leexdo iyo qalabka off si toos ah elektaroonik ah sida ay baahidaada, sida aanu u jeestay on nalalka at fiid iyo iyaga dami at qorrax ka soo baxa. Waxaad u abuuri kartaa koox dhamaan aaladahaaga caqliga leh oo aad ku xakameyn kartaa hal amar. Iyada oo la shaqeynayo saacadaha tirinta, si fudud u dhig saacad loogu talagalay barta korantada caqliga leh si toos ah looga damiyo.
AQOONSI IYO SUSTAINABLE - Waxaan bixinnaa Dammaanadda Daymaha Dayacan ee 60 wixii sabab kasta ah iyo Dammaanadda 2 ee Saacadaha Sayniska. dhibaatooyinka. Haddii aad la kulantid dhibaato ama aad u baahan tahay caawinaad dheeraad ah, ha ka waaban inaad nala soo xiriirto email ama si toos ah Amazon. Macluumaadka xiriirkayagu waxaad ka arki kartaa faallooyinka hoos ku qoran. Waxaanu bixinnaa adeegga bedelka bilaashka ah wakhti kasta iyo sabab kasta ha noqotee haddii fiiladu ay khaldan tahay, fadlan nala soo xiriir mar kasta oo aad la kulanto dhibaatada alaabta.
Raac @BGRDeals on Twitter si aan kugu wargalinno wax-bixinnada ugu dambeeyay. shiraaca. Tirada ayaa laga yaabaa inay koobnaato. Qiimayaashu waa isbeddelayaan ogeysiis la'aan iyo kuubannada ayaa dhici kara wakhti kasta. Qaar ka mid ah deeqaha ayaa laga yaabaa inaysan u heli karin dhammaan macaamiisha. BGR waxay heli kartaa komishanka amarada lagu meeleeyay sheygan.
Lo 'muqadas ah ... Apple Watch Series 3 ee Apple ay hoos ugu dhigtay 299 $ oo ku soo laabatay 229 $ Amazon - BGR